पाँच वर्षभित्र मागभन्दा ३ हजार मेगावाट विद्युत् बढी – Samacharpati
माग र आपूर्तिको प्रक्षेपणका आधारमा पाँच वर्षपछि ३ हजार १४ मेगावाट विद्युत् हुने देखिएको छ । हालको विद्युत् माग, उत्पादन र आपूर्तिको विश्लेषण गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा विद्युत् उत्पादन ६७१७ मेगावाट पुग्नेछ भने यसमा ३०१४ मेगावाट सरप्लस हुनेछ । १५ प्रतिशत वृद्धिलाई आधार मानेर गरेको प्रक्षेपणमा भने सन् २०२४ मा ३९४७ मेगावाट पुग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सन् २०१९÷२०१० मै विद्युत्को माग २२२५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
यसैगरी सन् २०२१ मा विद्युत् उत्पादन २२३६ मेगावाट हुनेछ भने ७०१ मेगावाट सरप्लस हुने छ । त्यसैगरी सन् २०२३ मा भने उत्पादन ५२४९ मेगावाट पुग्नेछ भने १६२५ मेगावाट सरप्लस हुनेछ । यसरी बढ्दै जाँदा पाँच वर्षमा ३ हजार विद्युत् सरप्लस हुनेछ । यो समाचार आजको कारोबारमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।
लामचौरमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महिला भलिवल प्रतियोगितामा ६ टिमले सहभागीता जनाउने
समितिको निर्देशन सरकार किन ? टेर्दैन’ !
पिपीएल क्रिकेटको दोस्रो संस्करणमा धनगढी र पोखरा बाहिरिए